Ukucaciswa isivinini njalo (R22, LSS 60Hz 3Φ, 380V / 460V) - China AOXIN HVAC INGXENYE
Ukucaciswa isivinini njalo (R22, LSS 60Hz 3Φ, 380V / 460V)
Refrigerant Uhlobo imvamisa voltage Series Model Ari
Cooling Umthamo wokufaka EER COP
Btu / ihora Watts Watts Btu / W.hr W / W
-R22 LSS 60Hz 3Φ, 380V SQ SQ028UA 28.500 8.353 2.639 10.8 3.17
LG samandla motor ukunikeza amanani ezinengqondo kanye umahluko kumakhasimende eyongayo ngokuzuza isigaba emhlabeni eco-friendly & kwagezi ubuchwepheshe. Ngempela LG ngokuqhubekayo ivela iqembu ephezulu ukucacisa machining nasemhlanganweni ubuchwepheshe kusukela amasu zanqwabelana yokwenza umhlaba izingxenye ezingcono kakhulu esimeme futhi ukunikeza inverter izixazululo Imininingwane elungiselelwe imvelo zokuhlala kanye commercial ukuze ukuletha izinga ukwaneliseka lazo zonke abalingani bethu.
Kwenzelwe samandla Ukuphakama
Ngokucindezela kokubili ozimele main futhi aphansi eksisi eqonde ngqo phezulu kudalwa ethuthukisa ukuqondanisa nekghono by ukunciphisa ukumelana.
Ukuphakama elungiselelwe nesisindo kuyehla ngokucindezela ifreyimu engezansi emzimbeni igobolondo bese Welding.
Negesi Force Mechanism
Ithiphu uphawu indlela kungaba disadvantageous igesi amandla indlela ngenxa ukuvuza ezingaba ukuthi singenzeka ngokusebenzisa ithiphu uphawu imvume. Negesi amandla indlela isebenzisa ingcindezi Lesisemkhatsini bonyana batshidze umqulu isethi ukunciphisa ukuvuza, ngaleyo ndlela enze kube nokwenzeka ukuba aklame okusezingeni eliphezulu kahle compressor.
New siqala kabusha Mechanism
Relief indlela encwadini orbit kuthuthukisa compressor ukuqalisa phansi umsebenzi ngokuvumela bevalelekile ingcindezi Lesisemkhatsini igesi ukubaleka ngokushesha lapho compressor kuziwa stop.
Previous: Ukucaciswa isivinini njalo (R22, LSS)
Okulandelayo: Ukucaciswa njalo Generation isivinini-2nd (R410A, LSS 60Hz 1Φ, 208-230V)
Ac samandla Izindleko
Ukuphumelela High IzE samandla
Efficiency High Pheqela samandla
Ikhaya IzE samandla
ovundlile Pheqela samandla
Sanyo Pheqela samandla
Pheqela Ekupholiseni samandla
Pheqela Ekupholiseni samandla Abakhiqizi
Pheqela samandla Abakhiqizi
Pheqela Uhlobo samandla
Ukucaciswa-njalo isivinini (R410A, R407C / 1P ...
Ukucaciswa-inverter (R410A, R32 / 1Piston, 2P ...